Starlux Airlines dia mijery an'i Taiwan mankany amin'ny làlan'i Etazonia
Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Starlux Airlines dia mijery an'i Taiwan mankany amin'ny làlan'i Etazonia
Airlines • Airport • fampiasam-bola • Vaovao • Vaovao Mafana Taiwan • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Starlux Airlines dia tsy miorina any Luxembourg fa any Taiwan. Ny fiaramanidina izao dia efa handray fiaramanidina neo 10 Airbus A321.
Starlux Airlines dia mikasa ny hanao sidina lavitra avy any Taiwan mankany amin'ny firenena avaratra atsinanana sy atsimo atsinanana, miaraka amin'ny serivisy hanombohana amin'ny telovolana voalohany amin'ny taona ho avy.
Starlux no kaompaniam-piaramanidina voalohany any Taiwan miasa ny fiaramanidina A321neo ary nahazo mari-pahaizana fanamarinana avy amin'ny Civil Aeronautics Administration (CAA).
Ny orinasa dia mety manidina ny fiaramanidina A321neo misy zoro tokana - kinova lava kokoa an'ny A320 izay mahomby kokoa amin'ny solika ary manana fahaiza-manao betsaka - amin'ny volana Janoary amin'ny taona ho avy izao raha toa ka mahazo ny mari-pankasitrahana momba ny Air Operator avy amin'ny mpandrindra ny fiaramanidina mialoha ny nandrasana.
Starlux koa dia mikasa ny hividy fiaramanidina A17 350, izay hampiasaina amin'ny sidina lavitra, toy ny eo anelanelan'ny Taiwan sy Etazonia. Ny fanaterana ho an'ny A350 dia kasaina ho an'ny 2021 hatramin'ny 2024.
Manantena ny hahazo ny fanamarinana ny mpandraharaha an'habakabaka amin'ny faran'ny taona ity ny orinasa.
Starlux dia mikasa ny hanakarama mpanatrika sidina 120 amin'ny volana Jolay. Ny mpiasa manontolo dia kasaina ho 620 aorian'ny volana jolay ary 1000 alohan'ny hanombohan'ny asa.